War Deg Deg ah: Duqeymo xooggan oo goor dhow ka dhacay Muqdisho, xili amniga la xoojiyey - iftineducation.com
iftineducation.com – Duqeymo ayaa goor dhow abaare 8:10 fiidnimo ee caawa laga maqlay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho kuwaasoo loo adeegsaday madaafiic hoobiyeyaal ah.
Duqeyntan oo daryankeeda si weyn looga maqlayey inta badan magaalada ayaa khal khal xoogan ku abuuray shacabka magaalada.
Wararka ugu horeeya ee la helayo ayaa sheegaya in madaafiicda oo dhowr ahaa mid ka mid ah uu ka dhacay nawaaxiga isgoyska Dabka ee wadada Maka Al-Mukarama, iyadoo la maqlay rasaas ay fureen ciidamada amaanka.
Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in madaafiic kale ay ku dhaceen xaafado ka tirsan degmooyinka waaberi, Xamar jajab iyo meelo kale, waxaana madaafiicdan ay cabsi ku abuureen dadka shacabka ah, welina ma cadda khasaaraha ka dhashay.
Duqeymahan ayaa ku soo aadaya xili maanta la xoojiyey amaanka magaalada Muqdisho oo la filayo iney maalinta beri ka dhacdo doorashada madaxweynaha Somalia, waxaana maanta la xiray wadooyinka magaalada oo dhan iyadoo ciidamo badana la geeyey goobaha muhiimka ah.
Waxay ku soo beegmayaan xili maalinta beri ah la filayo iney magaalada ka dhacdo doorashada madaxweynaha Somalia oo si weyn loo sugayo
Wixii warar ah ee ku soo kordha la soco
Musharaxa Shiikh Shariif oo shir jaraa’id oo xasaasi ah ku qabtay Muqdisho, kana hadlay..